ထီပေါက်မှန်း မသိ၍ နစ်နာဆုံးရှုံးသွားရသည့် အဖြစ်မျိုး နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ထီပေါက်သူများ? - Yangon Media Group
ထီပေါက်မှန်း မသိ၍ နစ်နာဆုံးရှုံးသွားရသည့် အဖြစ်မျိုး နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ထီပေါက်သူများ?
ထီ ပေါက်မှန်းမသိ၍ နစ်နာဆုံးရှုံးသွားရသည့်အဖြစ်မျိုး နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်သက်ဆိုင်ရာ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ တာဝန်ရှိ သူတွေများအနေဖြင့် စေတနာထား ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပြီး ထီပေါက်သူများကို ဌာနမှလေး လေးစားစားအကြောင်းကြားပေး နိုင်ရန်လည်း စီမံဆောင်ရွက်သင့် ကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်(၄) အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးထိန်ဝင်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အဆိုပါကျပ် ၁ဝဝဝ တန် အောင်ဘာလေထီအား ဆုကြေး ချီးမြှင့်ရာတွင် အမြင့်ဆုံးကျပ်သိန်း ၁၅ဝဝဝ မှ အနည်းဆုံး ကျပ် ၅ဝဝဝဝ ဆုဟူ၍ သတ်မှတ်ထားရှိပြီး ဆုကြေးခွဲဝေရာတွင် ကျပ် ၅ဝဝ တန်အောင် ဘာလေထီကဲ့သို့ ထီလက်မှတ်ရောင်းရငွေ၏ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆုကြေးအဖြစ်ခွဲဝေ သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျပ် ၄ဝ ရာခိုင် နှုန်းကို နိုင်ငံတော်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ် ငန်းများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင် ရန်အတွက် အခွန်ဘဏ္ဍာအဖြစ် ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးထိန်ဝင်းက”အများစုက ထီပေါက်မှန်းမသိလို့ လာမထုတ် ကြတာများပါလိမ့်မယ်။ ဆင်းရဲနိမ့် ကျတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အောင်ဘာလေထီဟာ ဆင်းရဲတွင်းက ထွက်ပေါက်ပဲ။ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါပဲ။ ထီပေါက်ရင်ငါတို့ ဘဝ ပြောင်းရချည်ရဲ့ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်လှလှတွေကို အကောင် အထည်ဖော်ဖို့ နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျပ် ၅ဝဝ တန်ထီကို ကျပ် ၇ဝဝ ပေးပြီး အားကိုးတကြီးနဲ့ ထီကိုအားပေးကံစမ်းနေ ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထီဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်မှုကြောင့် ထီပေါက်ရင် ထီ ပေါက်မှန်းမသိလို့ နစ်နာဆုံးရှုံးသွား ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်သက်ဆိုင်ရာ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ ဝါယမစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ စေတနာထား ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုအပ် နေပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်။ထီပေါက်တဲ့သူတွေကိုဌာနက လေးလေးစားစားနဲ့ အကြောင်းကြားပေးနိုင် ဖို့ စီမံဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ထီဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်နေတာ၊ ပေါက်တဲ့ထီ လာမထုတ်တာတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အားနည်းချက်ကြောင့် ဆိုတာ ငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး။ ဒီ လို အားနည်းချက်တွေကို ဘယ်လို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ စီမံ ထားတယ်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်က ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ် မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးဆဋ္ဌမ နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ မှ ပေးပို့သော ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ လမှ စက်တင်ဘာလအထိ ခြောက်လပတ် အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုအခြေ အနေနှင့် ၎င်းအပေါ် ပြည်သူ့ငွေ စာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီ၏လေ့ လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာ(၂/၂ဝ၁၉)နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရာ၌ ယင်းသို့ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ကျပ် ၁ဝဝဝ တန် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ်ကို ကားဂိတ်ကပေးသည့် ကားလက် မှတ်လောက်တောင်သားသားနား နားမရှိဟု ၎င်းက ထပ်လောင်း ဝေဖန်သည်။ အမျိုးသားလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထိန်ဝင်းက ”ကျပ် ၁ဝဝဝ တန်ထီလက်မှတ်ကလည်း ခါတိုင်းပုံစံပါပဲ။ စာရွက်ရိုက်ထားတဲ့ ကဏန်းတွေကလည်း မြန်မာစာအရေးအသား မှန်ကန်မှုရှိသည့် ရေးထုံးကျမရှိ၊ တောင်တစ်လုံး မြောက်တစ်လုံး တွေနဲ့ ကားဂိတ်ကပေးတဲ့ ကားလက်မှတ်လောက်တောင် သားသားနားနားမရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ စာရွက်သားကောင်းကောင်း ခံ့ခံ့ ညားညား မြန်မာစာရေးထုံးမှန်မှန် နဲ့ နံပါတ်တွေကို ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ထီမပေါက်သည့် တိုင်အောင် ထီလက်မှတ်ကို စွန့်မပစ်ရက်ဘဲနဲ့ သိမ်းထားချင် စိတ်ပေါက်အောင် လှလှပပခံ့ခံ့ညားညားဖြစ်စေလိုပါတယ်”ဟု အကြံပြုသည်။
လက်ရှိ အောင်ဘာလေသိန်း ဆုဌာနခွဲတွင် ထီဆုရရှိသော်လည်း ထီဆုရရှိမှန်းမသိခြင်း၊ ထီဆုလက် မှတ်ပျောက်ဆုံးပျက်စီးခြင်းများ ကြောင့် ဆုငွေများစွာ ထုတ်ယူရန် ကျန်ရှိနေသေးပြီး ထီတိုက်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် လစဉ် အောင်ဘာလေဆုပေါက်မဲ အရေအတွက်၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းနေရကာ အမြင့်ဆုံးကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုအထိ သိမ်းယူခဲ့ရကြောင်း အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဌာနခွဲမှသိရသည်။
အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သန့်လွင်က”အောင်ဘာလေသိန်း ဆုဌာနခွဲအနေနဲ့တော့ ထီဆိုင်တိုင်း ထီပေါက်ရမယ်။ ထီထိုးသူတိုင်း ထီပေါက်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ထီဆုတွေတိုးမြှင့်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးဆုမဲအရေ အတွက်ရဲ့ ငါးရာခိုင်နှုန်းလောက် သိမ်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောင့် ဒါက အောင်ဘာလေသိန်း ဆုဌာနခွဲအနေနဲ့ သိမ်းချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပေးထားတဲ့ကာလ အချိန်ကတစ်နှစ်ရှိပါတယ်။ ထီပေါက်စဉ်ထွက်တဲ့ရက်ကနေစပြီးတစ်နှစ်နေမှသိမ်းတာပါ။ ဒီတစ် နှစ်အတွင်းမှာ အချိန်မရွေး လာ ရောက် ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဖြစ် နေတာက ထီပေါက်တဲ့သူတွေသည် ထီတိုက်မှု အားနည်းနေပါတယ်။ထီပေါက်စဉ်နဲ့ တိုက်မှုအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘဏ္ဍာသိမ်း တွေ ကျန်ခဲ့တာရှိပါတယ်”ဟုပြော သည်။
မင်းသား ဂျီဆောင်းနဲ့ မင်းသမီး လီဘိုယောင်းတို့ ဒုတိယရင်သွေး ရရှိပြီ
ဖရဲ၊ သခွားစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများရှိ နိုင်ငံခြားသားများကို ယခုနှစ်မှ စတင်၍ ဝင်ငွေခွန် ??
မန္တလေးမြို့၌ Halloween Night ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲ ကျင်းပမည်၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းမှ အနုပညာရှင်များ
မြန်မာနိုင်ငံ အာမခံအသင်းရုံး ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားအာမခံ သင်တန်းကျောင်းများနှင့် န?